Hevitra MPANOHARIANA | Politika | 2
Ireo nasongadiko taorian'ny valim-pifidianana ofisialy
2019-01-11 @ 02:50 in Politika
Tatitry ny fihaonan-dRavalomanana tamin'ny Fianakaviambe iraisampirenena
Teo am-pihainoana ny "tsy mitombina ka lavina ny fitoriana..." tao amin'ny HCC
Fihetseham-po voalohany teo am-pandrenesana izay nandresy
Misy vitsivitsy maromaro nitovy hevitra tamiko tamin'ity filazana ity
Fandalovan'ny mpandresy tamin'ny fifidianana teo amin'ny kianjan'ny 13 mey. Toy ny efa nahanfantatra hatry ny ela izay nolaniana ho filoha ny mpitandro ny filaminana raha noezahina tsy hahazo miditra teo ny mpitaky ny ivoahan'ny fahamarinana.
Fihetsika voalohany nataon'ny Minisitry ny Atitany MAPAR rehefa re fa nolanian'ny HCC ho filoha ny kandidà Andry Rajoelina
Ny fanambaràn'ny mpandrindra nasionalin'ny fampandaniana ny filoha Ravalomanana
Ny fanambaràn'ny Filoha Ravalomanana
Ilay fomba fiteny nampiady hevitra avy amin'ny mpanao gazetin'ny VIVA
Ny afak'ampitson'ny fanambaràn'ny HCC
Ny nosoratako taorian'ny fahafantarana fisian'ny fanambaràna nataon-dRavalomanana
Fomba fijerin'olona iray ny antony hanohanany an-dRavalomanana
Natao ho tahirin'ny tantara ny tanjon'izao lahatsoratra izao voalohany. Vao avy nanoratra iray hafa aho teo.
Mazava ny antom-panakanana ny "Ã©cran genant"
2019-01-10 @ 18:52 in Politika
Efa re sy hitan'ny besinimaro ny vokatra navoakan'ny HCC fa mitovy tsara amin'ny isanjato navoakan'ny CENI ihany na dia tsy mitovy aza ny isan'ny vato nolazaina. Efa re sy hitan'ny besinimaro fa Rajoelina Andry Nirina no natao nandresy ary efa niarahaba azy tamin'ny alalan'ny Fair-Play ny resy tamin'io fotoana io dia ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc.
Mariho tsara fa hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany Atoa Ravalomanana Marc sy ny mpanohana azy no nitazona izany Fair-Play izany araka izay azony natao ary ny fijeriko kosa no milaza fa tsy nanao izany hatramin'ny voalohany kosa ny kandidà nandresy fa nikiribiby hatrany amin'ny filazana fa "tsy maintsy izy no mandresy". Midika izany amin'ny mpanoratra fa tsy maintsy atao mandresy amin'ny fomba rehetra ilay mpifaninana, na dia tsy mety na tsy mendrika aza ny nanaovana izany.
Ohatra niharihary indrindra, ny bileta tsy nahitana laharana no midika fa efa ela no nanomanana ilay hosoka ary hatrany anivon'ny CENI, tamin'ny fandrafetana ny endriky ny biletà, no nanaovana izany. Tsy vitavitaina fotsiny ho fanadinoana io toe-javatra io na hoe manjary "tsy secret" intsony ny safidy fa efa miharihary tamin'ireo mpitaky ny marina ny tanjona tao ambadika. Nihazakazahana navoaka ny valim-pifidianana na dia tsy mazava tamin'ny mpanara-baovao aza hoe avy aiza daholo ireo safidy nampidirina ireo. Fihazakazahana fampandresena ny lah-13 no natao ary tsy nasiana fihatsarambelatsihy mihitsy, nisy aza sary nahitana ny filohan'ny CENI niara-nampakatra vera tamin'ny kandidà nampandreseny rehefa navoaka ilay vokatra vonjimaika.
Dingana faharoa sady farany avy eo ny fanakanana araka izay azo atao ny famoahana ho hitam-bahoaka (etsy amin'ny kianjan'ny 13 mey) ireo hosoka sy halatra natao tany amin'ny faritany, indrindra ny tany amin'ireo faritra lavitra andriana izay nahazoana tombom-bato 600.000 mahery avy amin'ny biraom-pifidianana miisa 5452 (lasa tsy tadidiko tampoka fa mety ho 5254 ilay izy) ho an'ny mpandresy tamin'ny taham-pandraisana anjara mihoatra noho ny isan'ny mpifidy nisoratra anarana aza indraindray. Ny elanelam-bato manodidina ny 110 ka hatramin'ny 115 tamin'ireo biraom-pifidianana manokana ireo dia efa ahazoana io isa 600.000 io. Ny tsy amoahana ireo porofo ho hitan'ny besinimaro ka manjary manelingelina ny famoahan'ny HCC ilay fampandresena hitsindalana no antony nanakanana araka izay tratra ilay tolona mitaky ny fahamarinam-bato ary nitsipahana ireo fitoriana rehetra sy ireo fangatahana fanafoanam-bato rehetra. Efa tetika maty paika voaomana hatry ny ela sady goavana ka tsy tratran'ny lalàna intsony fa dia toy ny azo atao ho ara-dalàna, satria eo amin'ny fifidianana dia izay avoakan'ny fitsarana ihany no marina...
Tsy maintsy nanao dia miantsoro-mianoatra kely isika, hitodika kely tany amin'ny talohan'ny valim-pifidianana ofisialy mialoha ny mety amoahako ireo fihetsem-poko tany amin'ny media sosialy ho tsiaron'ny tantara amin'izay hevitry ny "nanohana ny resy".
Miankina manontolo amin'ny HCC ny hoavin'ny firenena
2019-01-07 @ 18:29 in Politika
Lazaina fa rahampitso talata (gorobaka) no havoakan'ny HCC amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana fihodinana faharoa. Voka-pifidianana tsy azo ivalozana eo amin'ny sehatry ny lalàna no vokany. Vokatra mampisy fanaintainana indrindra satria izay avoakany eo no tokony ho ekena. Tokony, nefa toa hiteraka krizy hatrany izay avoakany eo.
Raha hamafisina ny valiny avy amin'ny CENI izay vao nanambara indrindra ny filohany fa tsy nisy fifidianana madio tahaka ny farany teo tamin'ny tantaran'ny fifidianana teto Madagasikara hatramin'izay, dia tsy hanaiky ny efa nodradradradrainy ho hosoka sy halabato bevata ny mpanohana ny K25, nefa ho tratran'ny hery tsy mitovy, atody miady amim-bato, ka ho likiliky mandritra ny fiainana no sisa ho entiny, ary hieritreritra fa vita hatreo ny amin'izany Madagasikara izany fa dia ny hidi-trano sisa atao mafy raha mbola haharo ihany koa. Ny ankizy sisa no tezaina araka izay azo atao. Satria mihevitra ry zareo fa ho halatra sy gaboraraka no hanjaka. Ny tody sisa no atahorana hanakana amin'ny fanaovan-dratsy rehefa mieritreritra fa hihatra any amin'ny taranaka (manomboka eo amin'ny zanaka) ny fivarotan-tanindrazana sy ny fanambakàna.
Raha hotsipahina kosa ny vokatra navoakan'ny HCC na ho fanemorana izany na ho fanondroana ny mpifanandrina ho mpandresy kosa dia tsy hanaiky ny efa nihevi-tena ho nandresy ary tsy ho ataony ho vita moramora izany, Manana ny hery hanakorontanana sy hanerena ny hafa izy ary tsy ho azo visavisaina ny zavatra mety ho vitany, Efa misy dikany ny tsy fahatongavan'ny Praiminisitra sy ny minisitra avy amin'ny Mapar ary ny kandidàny tamin'ny lanonana fifampiarahaban'ny filoha natao teny Iavoloha androany, Efa fihaikana ireny ilazana fa afa-mandray ny fahefana ry zareo. Efa mazava eo amin'ny andaniny rahateo fa dian-tanandry zareo ny fanakanana ny tolon'ireo mitaky valim-pifidianana marina ialàn'ny hosoka.
Fehiny: fomba fijery ihany no mametraka fa na ho inona na ho inona dia tafiditra krizy hatrany i Madagasikara. Famahana olana vonjimaika fa hiteraka voka-dratsy tanteraka eo amin'ny hoavin'i Madagasikara ny fanamafisana ny vokatra avy amin'ny CENI. Ahiana hiteraka korontana izay tsy ho fanta-piafarana kosa ny ankoatra izay... ary mety hiteraka ady an-trano raha tsy voafehin'ny filoha vonjimaika avy hatrany ny mpitandro ny filaminana sy ny tafika, tsy hita anefa izany mety ahafahana mifehy ny tafika avy amin'ny filoha izany hatramin'ny mason'andro androany. Fomba fijery mialoha ny voka-pifidianana ihany izany...
Baraingo tanteraka ny vokatra avoakan'ny CENI
2018-12-21 @ 23:38 in Politika
Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia toy ny hoe "mana avy any an-danitra" izany ilay vokatra nasionaly. Raha mba manao izany kajy na matematika izany ianao dia miainga avy amin'ny zavatra mifangaroharo be ihany, mety ho lava dia lava, toa ratsy jerena, toa sarotra ny hamaha azy, saingy misy ny fitsipika matematika dia tsorina sy vahana olana tsikelikely. Izay voavaha ny olana dia efa mazava tsara ary itokiana ny fahamarinany. Dia mizotra tsimoramora mankany amin'ny valiny farany lasa tarehimarika tsotra maharesy lahatra ny rehetra ka ekeny rehefa hitan'ny rehetra ny dingana namahana azy tsikelikely.
Fa mba manao ahoana kosa ny vokatra avy ao amin'ny CENI? Tsy misy famahana sy fanatsorana hitan'ny rehetra eny an-dalana, izany hoe tsy misy manambatambatra miainga avy amin'ny Biraom-pifidianana tsirairay avy dia mivoaka etsy amin'ny farany ny vokatra farany fa lazaina fotsiny hoe ireto ny laza adina vahàna ny olana ao aminy, dia mandray milina fikajiana ianao (machine à calculer) dia Tadada... DAM= io ny vokatra nasionaly ry zareo. Koa raha izany ihany ve tsy vao tonga ny ampitson'ny andron'ny fifidianana dia efa hitan'ny rehetra avy hatrany ny voka-pifidianana feno? Fa mody lalaovina toy ny hoe miasa mafy nefa ny bokotra tsindriana mety mampiseho fotsiny hoe ity indray ny tarehimarika avoaka mba handemena ireo tsy nifidy ny olona tiana am-pandresena.
(Ny tohin'ny resako eto dia avy tao amin'ny fanehoan-kevitra navoakako Facebook raha sanatria misy tsy azonao ny fanjohin-kevitro)Tsy mazava mihitsy ny fomba fiasa ao amin'ny SRMV sy ny CENI. Ny mangarahara tokony ho an'ny daholobe. Raha mahatadidy ianao, ny fanao tao amin'ny RNM tamin'ny fanisa taloha dia nisy ny isaky ny fivondronana aloha, dia atambatra faritany ary farany vao ny manerana an'i Madagasikara. Inona anefa no hita ao amin'ny Ceni? Tonga dia vokatra nasionaly.
Raha misy ny fitomboan'isan'ny BV nasionaly dia tokony homarihana mazava tsara hoe ireto avy ny BV nampidirina mahatonga io isa io, izany hoe tokony hazava tsara ny historiques rehetra. Dia samy mikajy any an-tranony any ny tsirairay. Tsy misy afa-tsy izay no ahafahana mandresy lahatra ny olona hoe marina tokoa io vokatra nasionaly io.
Samy misy ny faritra nandreseny ka raha tiana hangarahara tsy mahita afa-tsy izay voalazako izay aho ahitana ny marina, saingy moa ve izany no tanterahana? Ahoana ny tena fizotran'ny asa?
Amiko hatramin'izao dia soratsoratana fotsiny handemen-tsaina ny vokatra nasionaly avoakan'ny CENI. Mila tamberin'andraikitra mazava tsara aho.
Valiny nomena ahy ny hoe tongava aty amin'ny CENI, mitondrà karapanondro dia mijery ny fandehan-javatra ao, novaliako tamin'izany hoe raha any Antsiranana, na Mahajanga, na Farafangana ilay olona dia ahoana? Efa andron'ny aterineto ihany koa isika izao, afaka mikajy any an-tranony daholo ny olon-drehetra haharesy lahatra azy fa marina tokoa ny vokatra ao amin'ny CENI... Fa hanao izany ve izy?
Tsotra ny fitakiana: Ataovy mangarahara ho hitan'ny rehetra ny fizotran'ny manampy sy manala ao amin'ny vokatra asehonareo tsikelikely, dia hanaiky resy tsy misy adihevitra ny resy fa rehefa tsy misy mangarahara eo dia aza lazaina ho mpanakorontana ny olona mitaky izany fa na ianareo no efa mikorontana fa tsy zakanareo ilay fanaovana ny asa, na misy zavatra afenina mafy satria ampandresena fotsiny izao izay... (aleo tsy tohizana fandrao lazaina ho manendrikendrika)
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 ... 51 52 53 Manaraka»